Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာ: မက္ကဆီကန်အစာအိမ်ဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှု | ခရီးသွားသတင်းများ
လူးဝစ် Martinez | 08/09/2021 15:00 | gastronomy, မက္ကစီကို
La Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာ ၎င်းသည်အလွန်ကြွယ်ဝပြီးကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည်မက္ကဆီကိုပြည်နယ်၏သမိုင်းကြောင်းများကြောင့်သာမကကိုလံဘီယာခေတ်မတိုင်မီကာလများက၎င်း၏စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဘိုးဘွားချက်ပြုတ်နည်းများမှများစွာသောထုတ်ကုန်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ဖော်ပြခဲ့သောပထမဆုံးအခြေအနေမှာ Aguascalientes သည်အလယ်ပိုင်းဒေသကိုမြို့တော်နှင့်မြို့တော်ကိုဆက်သွယ်ထားသောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ New Spain ၏ Viceroyalityဆိုလိုသည်မှာမက္ကဆီကိုစီးတီးကိုယ်တိုင်နှင့် (ငါတို့ဒီမှာမင်းကိုထားခဲ့မယ် ဤမြို့အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်) အဟောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်သည် Tenochtitlanမရ။ ၎င်းသည်မြောက်အမေရိကရှိ Hispanic ပိုင်ပစ္စည်းများ၊ တိုက်ကြီး၏အလယ်ပိုင်းဒေသ၊ ကျူးဘားကျွန်းနှင့်၎င်းနှင့်နီးစပ်သူများကိုလွှမ်းခြုံထားသောအလွန်ကြီးမားသောနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်နောက်ထပ်မသဲကွဲဘဲ Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုငါတို့မင်းကိုပြောပါလိမ့်မယ်။
1 Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာ: မက္ကဆီကိုပေါင်းစပ်မှု
1.1 Aguascalientes ၏ထူးခြားချက်များနှင့်မီးဖိုချောင်နှင့်၎င်း၏ဆက်ဆံရေး
1.2 Aguascalientes ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများ
1.2.1 ကြက်သား San Marcos
1.2.3 Menudo၊ သင်ကြိုးစားရမည့် Aguascalientes မှနောက်ထပ်ပုံမှန်အစားအစာ
1.2.6 ကျပ်သော gorditas များ
1.2.8 Aguascalientes ၏ပုံမှန်အချိုရည်များ
Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာ: မက္ကဆီကိုပေါင်းစပ်မှု
ငါတို့ကမင်းကိုရှင်းပြခဲ့တာတွေထဲက Aguascalientes ရဲ့ပုံမှန်ဟင်းလျာတွေဘဲ မက္ကဆီကန်ချက်ပြုတ်နည်းပေါင်းစပ်မှုမရ။ ၎င်းကိုတိုင်းရင်းဆေးနည်းဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးပါဝင်ပစ္စည်းများပိုထည့်သည်မှာမှန်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီပြည်နယ်ရဲ့ပုံမှန်အစားအစာတွေကိုအာရုံမစိုက်ခင်သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းနဲ့ထူးခြားချက်တွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်။ အချည်းနှီးမဖြစ်ပါ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မြေယာနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တို့သည်တရင်းတနှီးဆက်စပ်နေသည်။
ငါတို့ပြောနေသည့်အတိုင်း Aguascalientes သည်မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည် ငွေလမ်းကြောင်းမိုင်းများနှင့်ဆက်နွယ်နေသော၊ Zacatecas နှင့် မက္ကစီကိုစီးတီးမရ။ ၎င်းသည်ဧရိယာ၏မြောက်ဘက်အနည်းငယ်တွင်တည်ရှိသည် ရေတိမ်ပိုင်းမဟာကုန်းပြင်မြင့်နှင့်လွင်ပြင်များကိုပေါင်းစပ်ပြီးမီတာနှစ်ထောင်အထိမြင့်သောတောင်တန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
၎င်းသည်အလွန်မြေသြဇာကောင်းသောဒေသဖြစ်သောကြောင့်လယ်သမားများနှင့်ကုန်သည်များသည်သာယာဝပြောသောစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ creating ကိုဖန်တီးရန်ထိုနေရာတွင်ကြာကြာမနေခဲ့ပါ။ သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ထို့အပြင်ထိုဒေသ၏စားနပ်ရိက္ခာကိုကြွယ်ဝစေခဲ့သည်။
Aguascalientes ၏ရာသီဥတုသည်၎င်းအားအလွန်ပြင်းထန်စွာပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးပျော့ပျောင်းသောအပူချိန်ကိုပြသပြီးပျမ်းမျှအားဖြင့် ၁၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိသည်။ သူတို့သည်များသောအားဖြင့်ငါးအောက်သို့မဟုတ် ၃၀ ထက်မပိုပါ။ ၎င်း၏အပိုင်းအတွက်မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးသော်လည်းမြစ်များ၊ ဆည်များနှင့်ဤအခြေအနေကိုကုစားနိုင်သောရှေးဟောင်းဆည်မြောင်းနည်းလမ်းများရှိသည်။
ဤအရာအားလုံး၏ရလဒ်သည်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သောစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည် ပြောင်း၊ ဂျုံ၊ ငရုတ်သီး၊ အာလူး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ထောပတ်သီး၊ စပျစ်သီးနှင့်ပဲအမျိုးမျိုး၊ အဓိကအားဖြင့် ဤဟင်းသီးဟင်းရွက်အားလုံးကို Aguascalientes ၏ gastronomy တွင်လည်းကောင်း၊ အသားများ ၎င်း၏ခိုင်မာသောမွေးမြူရေးကဏ္byမှထုတ်လုပ်သည်။ ထိုဒေသ၌အရေးကြီးသောကျွဲနွားများနှင့်ဝက်များသာမကဆိတ်များနှင့်သိုးများပါရှိသည်။
ပြည်နယ်နှင့်အဓိကအားဖြင့်၎င်း၏မြို့တော်၌အစဉ်အလာရှိသည် ညစာစားပွဲနာမည်အကြံပြုသည့်အတိုင်းကွဲပြားသောအမျိုးအစားများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည် အဆာပြေ ညစာအတွက်။ တစ်ဖန်ဤအရာသည်သေးငယ်သောစားသုံးခြင်းများဖြစ်သည် tacos, enchiladas, flautas, tamales, tostadas သို့မဟုတ် pozoleဆိုလိုသည်မှာမက္ကဆီကိုတစ်လျှောက်ရိုးရာပြင်ဆင်မှုများဖြစ်သည်။ သို့သော် Aguascalientes ၏ပိုထူးခြားသောလက္ခဏာများမှာကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ပြောမည့်ဟင်းလျာများဖြစ်သည်။
ကြက်သား San Marcos
ဒါ့အပြင်ကိုခေါ် Aguascalientes ကြက်သားပြည်နယ်၏ရိုးရာဟင်းလျာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုများသောအားဖြင့်၎င်း၏နာမည်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပြင်ဆင်လေ့ရှိသည် FSan Marcos ဧရိယာမက္ကဆီကိုတွင်အရေးအပါဆုံးဟုယူဆသော၊ ဤအခမ်းအနားသည် ၁၈၂၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဟက်တာကိုးဆယ်ရှိသောဧရိယာ၌ကျင်းပသည်။
သူ့ရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုတွေထဲမှာ အမျိုးသားCharreríaချန်ပီယံရှစ် နှင့်ဂီတပွဲများ။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့သင်္ကေတကတော့ San Marcos ဥယျာဉ်ပွဲလမ်းသဘင်များစွာကျင်းပသောနေရာများဖြစ်သောလသာဆောင်များနှင့်လှပသောလူသွားစင်္ကြံ။
သို့သော် Aguascalientes ကြက်သို့ ပြန်၍ ၎င်းကိုအသားကိုကြိတ်ပြီးအသီးအနှံများနှင့်ပြုလုပ်ထားသောငံပြာရည်ထည့်ခြင်းဖြင့်ပြင်ဆင်သည်။ ၎င်းသည်သကြား၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်၊ မက်မွန်သီး၊ သစ်တော်သီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် apricots တို့ပါ ၀ င်သောချိုမြိန်သောအံ့သြဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အရာအားလုံးကိုအတူတကွချက်ပြုတ်ပြီးဟင်းကိုအရသာရှိစေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
El ချီလီ ၎င်းသည်မက္ကဆီကန်အစားအစာချက်ပြုတ်နည်းတွင်အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤငရုတ်ကောင်းမျိုးကိုတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်စားသည်။ သို့သော် Aguascalientes သည်အခြားဒေသများနှင့်ကွဲပြားအောင်ပြုလုပ်ရန်၎င်း၏ပုံမှန်နည်းလမ်းရှိသည်။
စစချင်းမှာငရုတ်သီးတောင့်ကြီးကအတွင်းပိုင်းကိုဖြည့်ပြီးဖြည့်ပေးတယ်။ ဤအတွက်အသုံးပြုသောထုတ်ကုန်များမှာမြေပြင်အမဲသားနှင့်ဝက်သား၊ ကြက်သွန်နီ၊ biznaga၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့်မာလကာတို့ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအရသာရှိစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် aguacalestense ငရုတ်သီး၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှာတစ်ခုဖြစ်သည် မယားပါဘူး.
Menudo၊ သင်ကြိုးစားရမည့် Aguascalientes မှနောက်ထပ်ပုံမှန်အစားအစာ
၎င်း၏အသွင်အပြင်သည်သင့်ကိုအချို့သောအရည်အသွေးများပေးနိုင်သော်လည်း menudo သည် Aguascalientes သို့သွားလျှင်သင်မြည်းစမ်းသင့်သောအရသာရှိသောဟင်းတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အာမခံသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ညီမျှသည် ပြောင်းဖူးဒါပေမယ့်ကွဲပြားတဲ့ပြင်ဆင်မှုနဲ့
အမှန်စင်စစ်၎င်းတွင်နွား၏အစာအိမ်အစိတ်အပိုင်းများသာမကအရိုးများ၊ ခြေထောက်များ၊ oregano ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ငရုတ်သီးခြောက်နှင့်ငရုတ်သီးတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤအရာအားလုံးနှင့်အတူလူသိများသောငံပြာရည်တစ်မျိုးဖြစ်သည် ဗိုက်ဟင်းရည်မရ။ ထို့ကြောင့်ဤနှစ်သက်မှုကိုမြည်းစမ်းရန်ရောက်သောအခါအရှုံးမပေးပါနှင့်။
Birria သည် Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာတစ်ခု၏ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်
ဤသည်မှာလည်းအသားဟင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအသားကင်ပေါ်တွင်ချက်ထားသောဝက်သားသို့မဟုတ်ဝက်သားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက်နံနံ၊ ကြက်သွန်နှင့်ငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်းတို့ကိုထည့်ပါ။ ဤပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အသားမှထွက်လာသောဖျော်ရည်များနှင့်အတူခရမ်းချဉ်သီးထည့်မည့်ဟင်းရည်ကိုပြင်ဆင်သည်။
ဒါပေမယ့်မင်းကိုအံ့သြစေမယ့်အရာကတော့ချက်ပြုတ်ခြင်းပဲ။ ၎င်းကိုယခင်ကသစ်သားများဖြင့်ပြည့်နေသောရေတွင်းထဲသို့ထည့်ထားသောသတ္တုကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်ပြုလုပ်သည်။ Maguey အရွက်များနှင့်မြေဆီလွှာများကိုအပေါ်ဆုံးတွင်ထားပြီးလေးနာရီခန့်ထားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အသားကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဟင်းရည်နှင့်အတူ တွဲ၍ ကျွေးသည် ပြောင်းဖူး tortillasမရ။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်တူညီသောအရသာရှိသောဟင်းဖြစ်သည်။
အမှန်တော့နို့စို့ဝက် (သို့) ဝက်ငယ်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စားလေ့ရှိသောအစာအိမ်အစာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်ဆက်မသွားဘဲဒီဟင်းက Castile တစ်လျှောက်မှာနာမည်ကြီးတယ် (ဒီမှာဆောင်းပါးတစ်ခုရှိတယ် Castilian Toledo မြို့) ့။ ဒါပေမယ့် Aguascalientes လူမျိုးတွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်။
အသားကိုကြော်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုအခွံခွာပြီးတွဲဖက်စားပါ guacamole ပထမဆုံးဖျော်ရည်ကိုကိုယ်တိုင်ရောစပ်ပါ။ ဤအရာကိုပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကိုပန်းကန်ပြားတစ်ခုသို့မဟုတ် taco အတွင်း၌စားသုံးသည်။ သင်သိသည့်အတိုင်းဤအရာသည် ပြောင်းဖူး tortilla ကျပ်နှင့်ထုပ် သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်အိမ်ပြန်မည့်အချိန်၊ ညပါတီများကိုစားသုံးရန်ဤနောက်ဆုံးနည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိမ့်မည်။
ကျပ်သော gorditas များ
ဤပန်းကန်သည်လမ်းဘေးအစားအစာများကဲ့သို့၎င်း၏မူလအစဖြစ်သည် burritos သို့မဟုတ်အတိအကျ၊ Tacoမရ။ သို့သော်၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်မက္ကဆီကို၏ gastronomy ၏အထူးစားဖွယ်နှင့်အထူးသဖြင့် Aguascalientes
၎င်းကို tortilla ပုံသဏ္cornန်ဖြင့်ပြောင်းဖူးပေါင်မုန့်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုဝက်သား၊ ကြက်သား (သို့) အမဲသားနှင့်ကျပ်သည် အသားလောင်ခြင်းမရ။ နောက်ဆုံးအရာသည်ကြက်သွန်၊ ရှာလကာရည်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်နှင့်မုန်လာဥနီတို့ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသောလက်ရာမြောက်သောအသုပ်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ညစာအတွက်အချို (သို့) အစပ်ငံပြာရည်ထည့်သည်။
Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာတွင်အချိုများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းတို့အနက်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကိုးကားနိုင်သည် cream နှင့်ထောပတ်လိပ်, သူ စပျစ်သီးပျစ် condoche နှင့်ခြစ်အုန်းသီး သို့မဟုတ် ခွံအချိုမုန့်မျိုးစုံဖြစ်သည့်
ဒါပေမယ့်ငါတို့မင်းကိုကိုးကားချင်တယ် မာလကာဒိန်ခဲ flan တကယ်အရသာရှိလို့ ၎င်း၏ပါဝင်ပစ္စည်းများမှာကြက်ဥ၊ နို့ဆီ၊ caramel နှင့် cream cheese တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုဒေသ၏မူလပံ့ပိုးကူညီမှုမှာ Aguascalientes တွင်ကြွယ်ဝစွာပေါက်ရောက်သောအလွန်ကောင်းမွန်သောအသီးဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့အချိုရည်တွေအကြောင်းမင်းမပြောဘဲ Aguascalientes ရဲ့ပုံမှန်အစားအစာခရီးစဉ်ကိုငါတို့မပြီးဆုံးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အရက်မသောက်တဲ့သူတွေအကြားမှာအဲဒါကိုစမ်းသုံးကြည့်ဖို့အကြံပေးပါတယ် ကလောင်maguey မှထုတ်ယူသောထိုဒေသတွင်အခြားအပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သူလည်းပါတယ် ချိုမြိန်သော uvate၎င်းကိုစပျစ်သီး၊ သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့်သကြားတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်အရက်ယမကာများထဲတွင်မင်းဘရန်ဒီ၊ အသီးမှထုတ်ယူသောအရာများနှင့်ဘရန်ဒီတို့ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးထက်, the အူမကြီးလည်းခေါ် ည.
၎င်းသည် nopal နှင့်အခြားစိန်သီးများအချဉ်ဖောက်ခြင်းမှပြုလုပ်သောကိုလံဘီယာမတိုင်မီမူလအရက်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် the အနီရောင်စိန်သီးဒါကြောင့်သောက်စရာမှာဒီအရောင်ရှိတယ်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ဤအပင်များ၏ဖျော်ရည်ကိုနှစ်နာရီသို့မဟုတ်သုံးနာရီကြာချက်ပြုတ်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းများစွာအချဉ်ဖောက်ရန်ချန်ထားခဲ့သည်။ ရလဒ်သည်ချိုမြိန်ပြီး ၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောဝတ်ရည်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ အရသာရှိသောဟင်းလျာများပါ ၀ င်သောမက္ကဆီကန်ပြည်နယ်၊ Aguascalientes ၏ပုံမှန်ဟင်းလျာအချို့ကိုငါတို့ပြထားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားချက်ပြုတ်နည်းများကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ဥပမာ, pocholasကြက်သားကိုအသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကင်နှင့်ဆတူရောပြီးပဲနှင့်ထမင်းဖြင့်ကျွေးသည်။ ဒါမှမဟုတ် morita chile sauce တွင် tenderloinထိုငရုတ်သီး၏ငံပြာရည်နှင့်အတူ ၀ က်သားသည်၎င်းပြည်နယ်တွင်အရသာအရှိဆုံးဟင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့် Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာ၏နောက်ထပ်ပန်းကန်သည် tatemada အသားငရုတ်သီးငရုတ်ကောင်းနှင့်မှဲ့ပါသောထမင်းကိုပြုတ်ပြီးထမင်း၊ ပဲ၊ နှင့်ပြောင်းဖူး tortillas တို့ဖြင့်ကျွေးသည်။ သူတို့ကအရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတွေလို့မင်းမထင်ဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » မက္ကစီကို » Aguascalientes ၏ပုံမှန်အစားအစာ